Firefox for Android Store Description, release channel, for: my
Firefox for Android (my)
Description — 3116 characters
လျင်မြန်၊ ကောင်းမွန်ပြီး မိမိဆိုင်ရာ ဝဘ်ကို အသုံးပြုခံစားပါ။ Firefox is the independent, people-first browser made by Mozilla, voted the Most Trusted Internet Company for Privacy. Upgrade today and join hundreds of millions who depend on Firefox foramore personal browsing experience.
မြန်ဆန်၊ ကောင်းမွန်၊ သင့်အတွက်
အလိုအလျောက်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိပြီး မြန်ဆန်သော ရှာဖွေမှု
- ကိုယ်ရေးကာကွယ်မှုကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ Private Browsing with Tracking Protection blocks parts of Web pages that may track your browsing activity.
ကိရိယာများအားလုံးတွင် Firefox ရှိ မိမိအချက်အလက်များကို တစ်ပြေးညီ ဖြစ်စေပါ။
- မိုဇီလာအကောင့်နှင့် ရှာဖွေမှုမှတ်တမ်းများ စာမှတ်သားမှုများကို လက်ခံပြီး မိမိ ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များတွင် တက်များ ဖွင့်ပါ
ဆန်းသစ်သော အသွင်အပြင်များနှင့် တပ်ဗ်များ
အသုံးပြုနေကျ ဝဘ်ဆိုက်များအတွက် လွယ်ကူအသုံးချနိုင်မှု
- သူတို့ကို ကြည့်ရှုမည့်အစား သင့်ကြိုက်နှစ်သက်ရာဆိုက်များတွင် အချိန်ဖြုန်းမည်
မျက်နှာပြင်အကြီးကြီးသို့ ခေါ်ဆောင် ကြည့်ရှုပါ။
Android အတွက် Firefox ကို ပိုမိုလေ့လာကြည့်ပါ။
- မေးစရာရှိပါသလား သို့မဟုတ် အကူအညီ လိုအပ်ပါသလား။ https://support.mozilla.org/mobile တွင် ကြည့်ရှုပါ
- Firefox ခွင့်ပြုချက်များအကြောင်းကို ဖတ်ရှုပါ။ https://mzl.la/Permissions
- Mozilla ရှိ သတင်းများအကြောင်းကို ပိုမိုလေ့လာပါ။ https://blog.mozilla.org
- Facebook တွင် Firefox ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါ၊ https://mzl.la/FXFacebook
- Twitter တွင် Firefox သတင်းများ ရယူပါ၊ https://mzl.la/FXTwitter
Mozilla exists to build the Internet asapublic resource accessible to all because we believe open and free is better than closed and controlled. We build products like Firefox to promote choice and transparency and give people more control over their lives online. https://www.mozilla.org တွင် ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်
ကိုယ်ရေးကာကွယ်မှု မူဝါဒ https://www.mozilla.org/legal/privacy/firefox.html
လျင်မြန်၊ ထက်မြက်၊ သင့်အတွက်။
ကြိုတင်ခန့်မှန်းရရှိထားသည့် ရလဒ်များကို ရယူပါ